रानीपोखरी र धरहरा पुननिर्माण, फर्केला पहिलाकै संरचनामा ? – Khabar Silo
रानीपोखरी र धरहरा पुननिर्माणको काम तीब्रगतिमा हुँदैछ । लामोसमयदेखि विवादित यी संरचना पुननिर्माण प्राविधिकरणले जिम्मा पाएसँगै निर्माणको कामले गति लिन थालेको हो । १२ वैशाख २०७२ को भूकम्पले क्षति पुगेका यी संरचना ऐतिहासिक संरचना मानिन्छ ।
भुकम्पले निकै क्षति पु¥याएको यी संरचना नबन्ने हो की ? पहिलाकै जस्तो नहुने हो कि ? भन्ने आम चासोको विषय बनेको थियो । भूकम्प गएको १० महिना पछि २ माघमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरी पूनर्निर्माणको सुभारम्भ गरे पनि काम भने अघि बढ्न सकेको थिएन ।
पोखरी निर्माणको काम उपभोक्त समितिले निर्माण गर्दै आएको छ भने वाल गोपालेश्वरको मन्दिर, पूल र सौन्दर्यकरणको काम भने सि.एम.सी जेभीले गर्दै आएको छ । पोखरी निर्माणको काम झण्डै ५० प्रतिशत सकिएको उनले बताए । पोखरीमा माटो भर्न बढी समय लाग्ने भएकाले फागुन मसान्तसम्ममा पोखरी निर्माणको पाटो सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए ।
पोखरीमा हालिएको माटो खानीबाटै ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेकाले पोखरी निर्माणमा समय लागेको उनले बताए । त्यस्तै, रानीपोखरी भित्रको पूल निर्माण पनि ८० प्रतिशत सकिएको मानन्धरले जानकारी दिए । पुलमा १९ वटा ठूला प्वाल बनाउनुपर्नेमा १७ वटा बनिसकेको छ ।
धरहरा पुननिर्माण, ०७७ कत्तिकमा सक्ने
भुकम्पले क्षति पु-याएको अर्को ऐतिहासिक संरचना धरहराको पुननिर्माण पनि यतिबेला तीब्र गतिमा भइरहेको छ । भूकम्पपछिका चार वर्ष विवादमै रहेको धरहरा केपी शर्मा ओलीले ‘मै बनाउँ छु, मेरो धरहरा’ भन्ने नारा अभियान समेत चलाएका थिए । अभियानको गति त्यति प्रभावकारी हुन नसकेपछि पुननिर्माण प्राविधिकरणलाई जिम्मा दिएको थियो ।
तर, अब भने पहिलाकै झै चुनढुङ्गाबाट मौलिक संरचनामा नभइ आधुनिक शैलीमा निर्माण हुन लागेको पुरातत्व विद् मानन्धरले जानकारी दिए ।हालसम्म छैटौं तल्लाको काम सकेर सातौं तला बनाउने तयारी भएको मालन्धरले बताए । २९ माघसम्ममा सातौं तलाको निर्माण सक्ने उनको भनाई छ । बाहिर हेर्दा जुद्ध समशेरले बनाएको जस्तो देखिएपनि पहिलेको भन्दा निकै भिन्न र आधुनिक हुने उनले जानकारी दिए ।
हाल बन्न थालेको धरहरामा दुई तला अन्डरग्राउण्ड कार पार्किङ छ । चढ्न झर्नका लागि ‘लिफ्ट’ राखिने छ । तर, पुरातत्व विद्हरूले भने धरहरा भित्र ‘लिफ्ट’ राख्न नहुने भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् । मालन्धरले भने ‘यसमा विरोध गर्नु कुनै तुक छैन, धरहरा विशुद्ध आधुनिक तरिकारले निर्माण भइरहेकोले यसलाइ जुन ढाँचाबाट पनि लैजान सकिन्छ ।’
बझाङ, ०९ माघ । पुषको अन्तिम सातादेखि सुरु भएका हिमपातका कारण बझाङमा ठूलो धनजनको क्षती भएको छ । चार पटकसम्म लगातार परेको हिमपातका कारण सुर्मा गाँउपालिकामा २ को ज्यान गएको छ । त्यस्तै सुर्मा र साइपाल गाँउपालिकामा करीब एघार सय पशु चौपाया मरेका छन् । हिमपातका कारण सबै भन्दा बढी साइपाल गाँउपालिकामा क्षती भएको छ […]